Lunn Set Noe Myat လွန်းဆက်နိုးမြတ်အရေးအသားလိုင်းများနှင့်အဖွဲ့အနွဲ့ဝါကျများ: May 2010
လုပ်ပါဦး ဆရာကြီးရယ် ကိုရေခဲရယ်လေ ကျွန်မကို အိမ်ပေါ်က ဇွတ်နှင်ချနေတယ်
သောက်တာကတော့ ညနေတိုင်း သောက်တာပါပဲ ဒီနေ့ကျမှ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး
ဟို အိပ်နေတဲ့ အကြီးကောင်ကိုလည်း ခြေထောက်နဲ့ ကန်နှိုးပြီး နှသ်ချတယ် ကျွန်မက ကိတ်စ
မရှိပေမယ့် ကလေးတွေရှိသေးတယ်လေ ကလေးတွေက သူနဲ့ရတာ မဟုတ်သလိုပဲ ဆရာကြီး
ရယ် ကျွန်မကိုလည်း ထိုးမယ် ကြိတ်မယ် တကဲကဲ ဟင့်အင်း သူဘယ်လောက်သောက်သောက်
ကျွန်မ ဘာမှမပြောဘူး သူရှာတာ သူသောက်တာပဲရှင် ဘာပြောရမှာလဲ ကျွန်မနားလည်ပါတယ်
လခလား မှန်မှန်အပ်ပါတယ် ညနေပ ဆရာကြီး သူနဲ့တွေ့တော့ ဆိုင်ကနေ သောက်လာပြီး
နေပြီရှင့် အင်း ဟုတ်တယ် အဲ့ချိန်တုန်းက ကောင်းသေးတယ် ဆရာကြီးထွက်သွားတော့
ဆိုင်ကနေ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ဆွဲလာတာကို ဆက်သောက်တယ်လေ အကြောင်းပြချက်လား
စုံနေတာပါပဲရှင် ကျွန်မအပေါ် မရမကအပြစ်ရှာပြီး နှင်ချတာ ဟဲ့ ဟိုအငယ်ကောင် ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း
ကိုရေခဲကို ဆရာကြီးလိုက်ထိန်းပေးပါဦးရှင် ကျွန်မ ခုဘယ်သွားနေရမှန်းတောင် မသိဘူး
ဟိုလေ ဒီနေ့ ရှင်လခထုတ်ခဲ့လညးဆိုတာလေးတော့ ကျွန်မမေးမိလိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်
သူအပ်တာ မလုံလောက်မှန်းသိပေမယ့် ကျွန်မဘယ်တုန်းကမှ နည်းတယ်များတယ်မပြော
ခဲ့ပါဘူး ဆရာကတော်ရယ် တလောက အမေ့အိမ် ခဏပြန်နေတာကြာသွားတာကိုလည်း
အပြစ်လုပ်တယ် ဒီအငယ်ကောင်လေးက မနက်ဖြန်ကျရင် စာမေးပွဲဖြေရဦးမှာ အမေ့
အိမ်ပြန်တယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်မမှာ အကြောင်းရှိလို့ပါ ကိုရေခဲကို လိုက်ပြောပေးပါဦး
ဆရာကြီးရယ် ဆရာကြီးတပည့်က ဆရာကြီးကိုမှ ကြောက်တာ။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 8:07 PM No comments:
တစ်မနက်လုံးလည်း သွားတတ်တဲ့ နေရာအနှံ့ရှာခဲ့တယ်
အိမ်နီးချင်းတွေ မေးတော့လည်း သတိမထားမိကြဘူးဖြေတယ်
အ၀ါတစ်ကောင် အဖြူတစ်ကောင် အနက်နဲ့ မီးခိုးစပ်ထားတာက
တစ်ကောင် အားလုံးပေါင်းသုံးကောင် ဒီတောင်ကို ဘယ်လိုကျော်မလဲ
မတွေးတတ်တော့ဘူး ရပ်ကွက်ထဲက အခြားကြောင်မွေးတတ်သူတွေဆီ
ရောက်တော့ မကြာခဏပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကြောင်များအကြောင်း သိရ
ကြောင်သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ပြီး ကြောင်ပျောက်ကြေငြာပဲ သတင်းစာ
ထဲ ထည့်လိုက်ရတော့မလိုလို နို့ငတ်နေတဲ့ ကြောင်ပေါက်စကလေးတွေ
ကြည့်ရတာကိုက ဇာတ်နာနေတာ ကြောင်သားစားတဲ့လူဆိုတာ တခြား
ကျောကုန်းမှာ ဘို့မပါဘူး အခြားလူတွေထက်ပိုပြီး ထူးခြားထင်ရှားတဲ့
အမှတ်အသားမပါဘူး ဘာဖြစ်လို့ သားမွေးပြီးကာစ ကြောင်မကြီးကိုမှ
ရွေးယူသွားရတာလဲ အရပ်ကတို့ရယ် ဒီ့အရင် ကြောင်ပျောက်ဖူးသူတွေ
ရဲ့ လျို့ဝှက်စစ်တမ်းအရဆို ဒီရပ်ကွက်မှာ ကြောင်သတ်စားတဲ့လူအရေ
အတွက် တဖြည်းဖြည်းများလာ ကြောင်သားဟာ အဲဒီလောက်ချိုသလား
သမီးရယ် အချိန်မှီ အိမ်အမြန်ပြန်လာပါ ကြောင်ပျောက်လို့ အလုပ်တောင်
ဒီနေ့မသွားဖြစ်ဘူး ကြောင်ပေါက်လေးတွေကြည့်ပြီး ထမင်းစားမ၀င်ဘူး
လူတွေ လူတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဈေးသွားပြီး စားစရာမ၀ယ်ကြပါလိမ့်
ဘာဖြစ်လို့ ကြောင်သားခိုးစားကြတာပါလိမ့်။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 8:06 PM No comments:
မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ကြားမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကွဲပြားတယ်
မင်းက ငါ့ထက်စာရင် တွန့်ဆုတ်လွန်းတယ် စဉ်းစားလွန်းတယ်
ကိစ္စတော်တော်များများမှာ အမှားနည်းတယ် ငါက အရာရာထိပ်တိုက်တွေ့လိုက်ရမှ
ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ကောင် ဘ၀ကို စစ်တုရင်ရွေ့သလို မင်းအရမ်းသတိထား ကစားတယ်
ငါ့အတွက်က ဘ၀ဆိုတာ အံစာတုံးကို မြန်မြန်ပစ်ကြဲ မိုနိုပိုလီကစားနည်းပဲ မင်းနဲ့ငါ စကား
နိုင်လုပြီဆိုရင် ထထထွက်သွားတတ်တဲ့ ဟိုကောင်ကြီးကျတော့ ပုံစံတစ်မျိုး မင်းနဲ့ငါ သဘော
ထားကွဲလွဲတဲ့အခါ ဟိုကောင်ကြီးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ဟာအရေးကြီးတယ် ငါက ဘာမဆို အမှား
များတယ် တဒိုင်းဒိုင်းကန်သွင်းတတ်တယ် မင်းလို အစာကြေအောင်မစောင့်တတ်ဘူး အချိန်
အဆမရှိဘူး တစ်ခါတစ်လေ ဟိုကောင်ကြီးလည်း ငါ့လိုအချိန်အဆမရှိပြန်ဘူး မင်းအတွေး
အခေါ်တွေက လေးလံနက်နဲတယ် ငါလိုက်လို့မမှီဘူး မင်းပုံစံက ကြည့်လိုက်တိုင်း ဂေါ့ဖားသား
ထဲက အယ်လ်ပါစီနိုပဲ တစ်ခုခုကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်လို့ ဒါမျိုးအိုက်တင် ဟိုကောင်ကြီး
လည်း လုပ်တတ်တယ် မင်း ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပြောတဲ့အခါ ငါနားမလည်ပေမယ့်
ဒီလိုပဲ ငါကစားတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေ မင်းမလိုက်လည်း ဟိုကောင်ကြီးက လိုက်တာပဲ
ဒါပေမယ့် မင်းနဲ့ ငါရဲ့ တစ်ဖက်ဖက်မှာ အမြဲတမ်းတော့ ဟိုကောင်ကြီးမရပ်ဘူး ငါ့ဖက်ပါလိုက်
မင်းဖက်ရောက်လိုက်နဲ့ ကျောင်းတုန်းက မင်းဝါသနာဟာ ဥယျဉ်မှူး ငါစိတ်ပါတာက
ဘောလုံးသမား ဟိုကောင်ကြီးကိုတော့ ဒီကိစ္စမေးလို့မရဘူး အသံတိတ်တယ်
ခုတော့ မင်းအလုပ်က စာရေးဆရာ ငါ့အလုပ်က ကားပွဲစား
ဟိုကောင်ကြီးကတော့ သူဌေးသမီးနဲ့ ညားသွားတယ်။ ။
(ဒီကဗျာကို ပိတောက်ပွင့်သစ်မှာ ဖော်ပြခံရတော့ “မင်းအရမ်းသတိထား ကစားတယ်”ဆိုတဲ့ စာကြောင်းက စာစီရိုက်မှားနေပြီး“မင်းအရျွ်းသတိထားကစားတယ်”ဖြစ်သွားပြီး“မင်းနဲ့ငါ သဘောထားကွဲလွဲတဲ့အခါ ဟိုကောင်ကြီးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ဟာအရေးကြီးတယ် ငါက ဘာမဆို အမှားများတယ် ”ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကတော့ လုံးလုံးပါရှိမလာတော့ဘဲ “မင်းနဲ့ငါ ဘာမဆို အမှားများတယ်”လို့ လွဲမှားသွားခဲ့ပါတယ်။(ဒီအတွက် ဆရာ မောင်စိမ်းနီကို ပြောပြရာမှာတော့ ဆရာမောင်စိမ်းနီက လိုလိုလားလား အပြုသဘော လက်ခံပေးလို့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်)အခုတော့ ကျွန်တော် အပြည့်အစုံရေးထားပါတယ်။ အရသာမပျက်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ)
Posted by Lunn Set Noe Myat at 7:53 PM No comments:
Posted by Lunn Set Noe Myat at 7:51 PM No comments:
“ခင်ဗျားတို့ရှေ့ကို ရောက်လာတဲ့ နေ့စွဲတစ်ခုနဲ့ နာရီကို ကြည့်ပါ”
ကျွန်တော်က စာမသင်ချင်ဘူး ဆေးထိုးအပ်ကြောက်တယ်
သူ့အလိုလို တတ်ပြီးသား လမ်းကို လျှောက်ချင်တယ်
ကျွန်တော့်သားကို မိန်းမက ရိုက်တယ် ကျွန်တော်က ရိုက်တယ်
ကျွန်တော့်မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို ဆဲတယ်
(မချစ်လို့ မဟုတ်မှန်း လူတွေက သိကြတယ်)
ကျွန်တော်က အကြည့်နဲ့ ခွဲခဲ့တယ်
သနပ်ခါးကျောက်ပြင်က မိန်းမသားရှိတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတပေါ့
သည်းခြေဆိုတာ အရှင်လတ်လတ် ကြက်နဲ့ငါးတွေမှာပဲ တွေ့ဖူးတယ်
အရူးဆေးတွေမှန်း သိရက်နဲ့ နေ့စဉ်သုံးစွဲတယ်
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်ပုံတူကို ရေးပေးတဲ့ မိတ်ဆွေပန်းချီဆရာနဲ့
ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကို သူက ပန်းချီလို့ သတ်မှတ်ပြီး
သူ့ပန်းချီကားတွေကို ကျွန်တော်က ကဗျာလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်
မန္တလေးကို ကျွန်တော်က ခွဲခဲ့တယ်(ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပဲ လွမ်းနေတယ်)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းများနေလို့ မိန်းမယူတယ်
လမ်းက ကျွန်တော်ဟာ သူ့လူလို့ အလုခံရတဲ့အထိ
အတိတ်ကို မေ့လို့ရတဲ့အထိ ပျော်ရွှင်တယ်
ဆံပင်ရှည်ကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ၂၄.၄.၉၇နေ့စွဲနဲ့
စတင်ခြေချခဲ့တဲ့နေ့စွဲ ၅.၅.၉၇ကို စာအုပ်ပုံအဟောင်းထဲ
လက်ကျိုးဖူးတဲ့ ဓာတ်မှန်ကော်ပြားနဲ့အတူ ပြန်ရတယ်
ကျွန်တော့်မှာ ပျော်ရွှင်တာ မရှိဘူး သရုပ်မမှန်တာ မရှိဘူး
စက္ကူစွန်လေးတွေ လွှတ်နေတာ မကြည့်ချင်ဘူး
လူဟာ သကြားလုံးတစ်လုံးမဟုတ်မှန်း ပုရွက်ဆိတ်တွေက သိတယ်
ကျွန်တော်က ဘာမှမသိဘူး။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 8:40 PM No comments:
အလွမ်းတွေနဲ့ မာကျောမတ်စောက်နေတဲ့ ကမ်းပါးပေါ်မှာ
တပ်မက်သူမဲ့ အက္ခရာများ လွန်းထိုးပျံသန်း
ခြေထောက်ရဲ့ ဇက်ကြိုးကို နိုင်နင်းပါလျက်နဲ့
သန့်သက်အောင် ခါချခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်စက်တွေ
ဘယ်လိုမှ တည်ဆောက်ရာမရတဲ့ အတူတူတော့...
တစ္ဆေတွေလည်း လွမ်းတတ်ကြပါသေးတယ်။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:11 PM No comments:
နည်းနည်းပဲ သိတယ်လို့ ဆိုကရေးတီးလည်း ပြောဖူးတယ်။
၂၁-ရာစု တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေလည်း ပြောဖူးတယ်။
သိစရာတွေအားလုံးကို သိုလှောင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာကတောင်
သိစရာတွေ အများကြီး သိုလှောင်ဖို့ ကျန်သေးသတဲ့။
နည်းနည်းပဲ သိတယ်ဆိုတာ အမှန်တရားဖြစ်တယ်။
နည်းနည်းပဲ သိတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ
ငါ့အတွက်တော့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အကောင်းဆုံးပဲ။
ငါ့အကြောင်း ငါသိတယ်ဆိုတာ ဘယ်အထိသိနိုင်မှာလဲ
ငါ့ပြင်ပက အရှိတရားတွေကိုလည်း ငါနည်းနည်းပဲ သိတယ်။
အားလုံးဟာ ရိုးမသွားဘူး၊ငြီးငွေ့စရာ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
အားလုံးကို နည်းနည်းပဲသိလို့ ငါ့ဘ၀ ဆက်တိုက်ရှင်သန်လာခဲ့တယ်။
စုံလုံးကန်းအောင် လုပ်ခဲ့တာ အဲဒီအရောင်မဲ့
အရောင်တွေ ငါ့စိတ်ကူးတွေ ပျက်ပြားအောင် အဲဒီ
အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့ရဲ့ နေ့တွေကို ခိုးဝှက်ယူ
ငါ့အနုပညာတွေကို အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ တစ်စချင်းချိုးဖဲ့
အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့အိပ်မက်တွေကို ငါ့အနာဂတ်တွေကို
စုပ်မျိုစားသောက် အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့ရဲ့
ကြယ်တံခွန်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ် အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ
ငါ့ရဲ့ မိုးကောင်ကင်နဲ့ ပင်လယ်ပြင်တွေကို အဲဒီအရောင်မဲ့
အရောင်တွေ အကြီးအကျယ် မှောက်မှားအောင် အဲဒီအရောင်မဲ့
အရောင်တွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်ကြံပြီး အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ
ငါ့ကို ငါ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ မုန်းတီးအောင် ပြတ်စဲအောင် အဲဒီ
အရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့ကို ထောင်ချောက်ထဲထည့်
အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့ကို အပြီးတိုင် မသတ်ဖြတ်
မသုတ်သင်သေးပဲ အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့ကို ရူးသွပ်အောင်
လုပ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ ငါ့အာရုံခံစားမှုတွေကို
ကန့်သတ် သိမ်းပိုက် ခြေမွ အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ
ငါ့ကို ပါးပါးလေး မွေးမြူလို့ ငါ့ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အဲဒီ
အရောင်မဲ့အရောင်တွေ ဇီဝိန်ခြွေနေတော့ရဲ့ အဲဒီအရောင်မဲ့
အရောင်တွေ ငါမမြင်နိုင်တဲ့ အဲဒီအရောင်မဲ့အရောင်တွေ။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:10 PM No comments:
ဘယ်သူ့ကို ဘာကို ဘယ်အရာကို စိတ်အ၀င်စားဆုံးလဲ
ငါမရှိဘူးဆိုတာ သိလျက်နဲ့ ငါကိ်ု ဗဟိုပြုရသလားတဲ့
ပြတင်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး အပြင်လောကကို ကသိုဏ်းရှု
အနံ့အရသာတွေကို သုညအဖြစ် ကသိုဏ်းရှု
ငါက ဗဟိုလား...ကမ္ဘာက ဗဟိုလား...
သိမှုက ဗဟိုလား...ရှိမှုက ဗဟိုလား...
ဗဟိုချက်ဆိုတာ ရှိလို့လား။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:08 PM No comments:
နယူတန်ထက် ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ။
မီးစာဟာ သန်းခေါင်ယံကို စုပ်မျိုလို့
ရုပ်တုက အသက်ဝင်နေတဲ့ အရိပ်မှာတော့
မျက်ဝန်းပြာဟာ မျက်ရည်ကို မမြင်ရဘူး။
နှလုံးသားဟာ ကျောက်တုံးလို အနာတရနဲ့
မြို့ရဲ့ မျှော်စင်ထက် လေးလံမြင့်မားပြီး
မြို့ရဲ့ လမ်းတွေထက် ရှည်လျားခဲ့တဲ့
ဖတ်ပြီး ပိတ်လိုက်ရမယ့် လွယ်လွယ်ဘ၀မဟုတ်ဘူး
ကြယ်ကို မြေကြီးထဲ ထိုးထည့်လိုက်ကြတယ်
ကြယ်ဆိုတာ မိုးကောင်းကင်ရဲ့ အရေးအရာလို့
ငါတို့ သိခဲ့ကြရပေါ့။ ။
မှတ်ချက်။ ။ကမီးကလော်ဒဲလ်(Camille Claudel)ကို ၁၈၆၄ မှာ မွေးတာ။ပန်းပုဆရာရိုဒင်ရဲ့
၁၅ နှစ်ကြာတွခဲ့တဲ့ ရည်းစား။ပြီး စွန်ပစ်ခံ၊အရူးထောင်မှာ ၂၅ နှစ်နီးပါး အရူးအဖြစ်
ဘ၀ကို ကုန်ဆုံးရ၊ ပြင်သစ်ပန်းပုပညာရှင်။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:06 PM No comments:
လတစ်စင်းရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈွတ္တကို သင်ပေးတယ်
လေပြည်တွေရဲ့ အသွားအလာကို သင်ပေးတယ်
ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲကို မုန်တိုင်းတွေ သွတ် သွတ်သွင်းတဲ့ကောင်
အပြစ်ကင်းတဲ့ လမ်းကလေးတွေအကြောင်း ပြောတယ်
ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ် ပိုးထိုးကျောက်တွေပေါ် လျှောက်ခိုင်းတဲ့ကောင်
အဲသလို အိမ်ဝေးသားဆိုးလေးရဲ့ အပြစ်
သားစားကျက်မရှိတဲ့ ကွင်းပြင်ထဲ ရောက်တဲ့အခါ
အနက်ရောင် ပန်းနှစ်ပွင့် ပန်တဲ့ကောင်မလေးက
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:03 PM No comments:
ငါဟာ အမြဲတမ်း တစ်ခုခု လိုနေတဲ့သူပါ။
သင်ခန်းစာတွေ ဖြေဆိုဖို့ မလိုတော့ဘူး
ပင်လယ်က မာလိန်မှူးကို လှည့်စားခဲ့
ခေါ်သံတွေက ဘာသာစကား(၁၆)မျိုးနဲ့ အော်မြည်လို့
ငါ့ တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပြန်ရုံသာ။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:02 PM No comments:
မနေ့ကမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငုံ့ကိုင်းကြည့်မိရဲ့
ကျွန်တော့်ရဲ့ ထွက်သက်ဝင်သက်ကလေးတောင် အရပ် အတော်မြင့်ခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော်ဟာလည်း ၀ူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ “လူ”အဖြစ် ပွင့်ခဲ့ရတာပါ။
အချစ်ဦးမသိအောင် ရေးရတဲ့ အရာပါ
ကံ့ကော်နဲ့ အဖူးရောအပွင့်ရော လွဲခဲ့ရသလိုမျိုး ဘာညာဘာညာ
အဲဒီလို မာယာအမှုကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြုခဲ့ဖူးပြီ။
လမ်းလျှောက်သူတို့ရဲ့ ဘာသာဘာဝ တုန်ခါယိမ်းသွေ့ဖူးတယ်။
အဲဒါကလွဲရင် သူလိုကိုယ်လိုလောက်တောင် ကျွန်တော် မကွေ့ကောက်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်နဲ့ သိုးထိန်းတို့ ခုလိုမျိုး စကားစိမ်းဆိုကြ
ကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့လည်း ဧရာဝတီဟာ စီးမြဲစီးနေလိမ့်မယ်
အဲဒါကို ပြောဖို့ကျန်ခဲ့တယ်။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 11:01 PM No comments:
လူက မညွတ်လည်း စိတ်က ညွတ်ပြီးသား
ဆုံမြဲနေရာမှာ ကိုယ့်မိုးတိမ်တွေက ညှို့
ကိုယ်ရွာချတဲ့ မိုးတွေ ဘယ်သူမှ မမြင်ပါဘူး။
ညနေတေးသံတွေ ဆွေးခဲ့။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 10:57 PM No comments:
ကိုယ်လျှောက်ရာ ဂျုံနဲ့ စပါးခင်းတွေကျန်ခဲ့
လမင်းကိုရပြီးတောင် ကြယ်တွေကို ပစ်မှားချင်တဲ့
သစ်တောကို တရိရိ ကိုက်ဖြတ်နေတဲ့ ခွေးအ
ကမ်းခြေ တနင်္ဂနွေ နေ့တစ်နေ့နဲ့
ကိုယ့်ဘ၀ မင်္ဂလာဦး ညတစ်ညကိုယူ
နှင်းကိုက်ခံ မနက်ခင်းများရဲ့ ခြေဖ၀ါး ဓားထိသံ
နှစ်နဲ့ချီပွင့်ခဲ့သော ဒုက္ခ ၁၂ x ၁၂လီတို့
အမေက ကျွန်တော့်ကို မမှတ်မိဘူး။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 9:57 PM No comments:
လမ်းဘေးအုတ်ခုံထိုင်တဲ့ သီချင်းဆန်ဆန်အော်ဟစ်မှုတွေ ရမယ်
အဝေးမပြေးနိုင်လို့ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ပြန်ပြန်လာတဲ့
ဈေးခေါ်ရင်း ဈေးခေါ်ရင်း ညည့်နက်နက်လာတဲ့ မြို့ကလေးပေါ့
ဟိုတုန်းက ဆုတံဆိပ်ရခဲ့ဖူးသူတွေကို မေ့နေမယ်
မူးယစ်သောက်စားထားသလောက် အားကစားလိုက်စားဖို့ မေ့နေမယ်
တစ်တစ်ရစ်ရစ် ကဗျာပြင်းအားတွေကို ၀ှက်ထားမယ်
သူ့အကြောင်း မကောင်းပြောမယ်အထင်ရောက်ပုံနဲ့ မရပါဘူး
အတွင်းတိမ်စွဲတယ်ပြောပြော သူ့အလင်းအားကို သူချွေတာ
သူ့လမ်းမလေးအတွက် အနက်ရောင်ဆေးတွေ သူချွေတာ
သူ့နှမ်းပင်တွေ ရေမျှော်ဖို့မလိုဘူး။ ။
Posted by Lunn Set Noe Myat at 9:56 PM No comments:
ငါဟာ ရွက်လွှင့် ငါဟာရွက်လွှင့်ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အော်ဆိုတယ်
ပြုဖူးခဲ့တဲ့ အပြစ်တစ်ခုအတွက် လူတွေကဲ့ရဲ့ကြတာ ဆန်းသလား
အိမ်ရှေ့လမ်းထွက်လျှောက်ရင်တောင် မြင်တဲ့သူက မတော်တဆလိုလို
( တကယ်က တမင်တကာ ) တံတွေးကို အသံမြည်အောင်ထွေးတယ် မျက်နှာ
ကို လေဖြတ်ထားသလို ရွဲ့ကြည့်တယ် အကြောင်းရှိလို့ အခေါ်အပြော
လုပ်ရင် ရွံသလိုလို တွန့်သလိုလို မကောင်းတတ်လို့ စကားပြန်ပြော
လိုက်ရတာလို့ သတင်းဖြန့်မယ် အဘိုးက တော်သလောက် အဖေက
ရည်မွန်သလောက် ဒင်းတို့ကျမှ မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ ကြုံကြိုက်လို့
တွေ့တဲ့အခါ အဝေးကြီးက ပတ်ရှောင်ပြ ပြီးရင် လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်
ထိုး မကောင်းပြောကြ အုပ်စုဖွဲ့စည်ကားနေတဲ့ကြား ရောက်သွားရင်
ရှဲခနဲ ချက်ချင်း လူစုကွဲသွားကြ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မသိကျွမ်းဖူးသူ
ကတောင် ယောင်တောင်တောင်နဲ့ အမြင်ကတ်ခြင်းခံရ ဒီလိုနဲ့ ခုနစ်ရက်
ပြည့်လို့ လမ်းမှာတွေ့တော့ အလကားနေရင်း ပြုံးပြတာကြုံတယ်
ဒီအင်္ကျီဘယ်ကဝယ်သလဲ ဒီဖိနပ်နဲ့ သိပ်လိုက်တာပဲ အကြောင်းမဲ့သပ်
သပ် ထမင်းစားဖိတ်ကျွေးတာခံရ မတွေ့ချင်လို့ ရှောင်သွားရင်တောင်
နောက်က ဇွတ်အတင်း လိုက်နှုတ်ဆက်ကြ တော်လွန်းလို့ အိမ်ကသား
သမီးတွေကို ဆုံးမတိုင်း ထည့်ထည့်ပြောရတယ် မျိုးရိုးက ဂွတ်ရှယ်
ဘမျိုးဘိုးတူ သားသမီးတွေလေ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ဖုန်းတ
ဂွမ်ဂွမ် လှမ်းဆက်ကြ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာအတွက် အကြံဥာဏ်
တွေ တောင်းလားတောင်း ထင်းရေးမီးရေး လာတိုင်ပင်လို့တိုင်ပင် ဘာမဆို
ခင်ဗျားထောက်ခံမှုလေးပါမှ လုပ်ဝံ့တယ်ဆိုသူကဆို ဒီမှာတော့ ဆရာကြီး
စတိုင်လ်နဲ့ပဲ နေရတော့မလိုလို ဘဝင်ပဲ မြင့်ရတော့မလိုလို အနေအထားမှာ
နောက်ထပ်ခုနစ်ရက်တစ်ခါ ပြည့်ပြန်တော့ ငါဟာရွက်လွှင့်
ငါဟာ ရွက်လွှင့်ဆိုတဲ့ သီချင်းက တစ်ကနေ ပြန်စပါလေရော ။ ။
၆ . ၂ . ၀၉
Posted by Lunn Set Noe Myat at 9:46 PM No comments:
ဟိုဘက်ကိုလှည့် ခါးမတ်မတ်ထား ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ
Posted by Lunn Set Noe Myat at 8:53 PM No comments:
“ခင်ဗျားတို့ရှေ့ကို ရောက်လာတဲ့ နေ့စွဲတစ်ခုနဲ့ နာရီ...